Fotoana famakiana: 7 minitra(Last Nohavaozina: 26/02/2021)
Izany no iray amin'ireo zava-nitranga manokana any Holandy izay tsy ho an'ny reraka fo! Raha te-hanomboka ny taona vaovao, maka nangatsiaka manao antsitrika manaraka nalaina tao amin'ny New taona Day (Taom-baovao Day). Zavatra fety io dia nanomboka iray milomano Club ao 1960. Misy 209 Manitrika toerana any Holandy azonao atao ny manao antsitrika. Na dia, antsitrika any amin'ny Ranomasina Avaratra ao amin'ny Scheveningen, The Hague, no toerana malaza indrindra amin'ny niakatra ho any 60,000 olona. Ary rehefa afaka izany, mampangovitra mpilomano dia aseho amin'ny kapoaky ny erwtensoep, ny lasopy mafana meaty pea.
Ny iray amin'ireo zava-nitranga manokana indrindra any Holandy, raha tsy iray amin'ireo tena mahafinaritra sy mikorontana, dia On Kings Day, Which dia mpanjaka Willem Alexander ny fitsingerenan'ny andro nahaterahana. Anarana iombonana tanàna hampiantrano antoko an-dalambe, parasy tsena, sy ny fiaraha-mientana, mamadika ny rehetra ny Holandy ho any amin'ny lehibe indrindra fetin'ny taona. Azonao antoka fa manampy izany ny iray amin'ireo indrindra manokana zava-nitranga tany Holandy! Lohan'ny avy ny olona hankalaza, milalao mozika, akanjo ny any Orange sy manana rehetra-tsara manodidina, raha tsy izany mikorontana, fotoana. Kings alina dia ankalazaina ny alina talohan'ny Kings Day, miaraka amina fety tsy ara-dalàna ao amin'ny manintona ny ivon-tanàna vahoaka avy amin'ny kilometatra manodidina azy.
SAIL dia manomboka amin'ny Parade: Sambo an-jatony no mankeny amin'ny IJ ary mamorona fahitana tsy manam-paharoa izay tsy hohadinoinao. Tamin'ny andro manaraka, lalao maro eo amin'ny rano hatao, anisan'izany ny Skutsjesilen(miara-sambo iray mampiavaka Frisian). The Royal Netherlands Tafika an-dranomasina ihany koa ny haneho ny fahaiza-manao eo amin'ny rano.